I Jamaika dia mitarika fifanakalozan-kevitra momba ny fizahan-tany misy toerana maro any amin'ny WTTC Global Summit
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » I Jamaika dia mitarika fifanakalozan-kevitra momba ny fizahan-tany misy toerana maro any amin'ny WTTC Global Summit
I Jamaika dia mitarika fifanakalozan-kevitra momba ny fizahan-tany marobe any WTTC
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, androany dia niantso fivoriana avo lenta amin'ireo minisitry ny fizahantany any Cancun Mexico, mba hiadian-kevitra ny amin'ny famaranana ny fandaminana ny fampiharana ny rafitra fizahan-tany misy fizahan-tany sy fifanarahana hanamafisana ireo tonga.
Fifanakalozan-kevitra mitohy eo amin'ny firenena ao amin'ny faritra no natao mba hampivelarana ny fizahan-tany fizahan-tany maro.
Jamaica no nitazona ny fivoriana tany amin'ny WTTC Global Summit hifantoka amin'ny fananganana vondron'asa toy izany.
Ity dia ho mpamadika lalao amin'ny diplaomasia fizahan-tany sy ny fampifanarahana toekarena ao amin'ny faritra Karaiba.
Meksika, Jamaika, Repoblika Dominikanina, Panama, ary Kiobà no mpilalao fototra tamin'ny dinika ary manantena ny hamaranana ity fifanarahana ity, ny voalohany aminy, manomboka amin'ny fiandohan'ny vanim-potoanan'ny ririnina 2022/2023. Taorinan'ny dinika nifanaovana nandritra ny taona maro nifanaovan'ny firenena ao amin'ny faritra ity mba hampivelatra ny fizahan-tany misy toerana maro, mba hampiroborobo ny fitomboan'ny sehatra.
Ny fivoriana, notarihin'i Jamaika, nifantoka ihany koa tamin'ny fananganana vondron'asa, hotarihin'i Mexico sy i Jamaika, hanomana drafitra antontan-taratasy amin'ny volana Jona 2021. "Vita ity miaraka amin'ny fanantenana fa ho vonona ny hiady hevitra sy ekena ao amin'ny Firenena Mikambana ny volavolan-taratasy. Fivorian'ny Komisiona an'ny fizahan-tany amerikanina (CAM), izay hatao any Kingston ny 19 Jona 2021, "hoy ny fanazavan'ny minisitra Bartlett.
“Ity fifanarahana ity dia ahafahana manao fandaharana amin'ny marketing iraisan'ny firenena roa tonta, sady manome safidy ho an'ny mpizaha tany ihany koa mandritra ny fialan-tsasatra ataon'izy ireo amin'ny vidin'ny fonosana manintona. Izy io dia ho mpamadika lalao amin'ny diplaomasia fizahan-tany sy ny fampifanarahana toekarena ao amin'ny faritra Karaiba, "hoy Andriamatoa Bartlett nanampy.
Tonga nanatrika ny fivoriana marolafy androany: ny Andriamatoa Miguel David Collado Morales, minisitry ny fizahan-tany ho an'ny Repoblika Dominikanina; Ny Andriamatoa Andriamatoa, Ivan Eskildsen, minisitry ny fizahantany any Panama; sy ny Halehibeny, Miguel Torruco Marqués, sekreteran'ny fizahan-tany, Mexico.
Hivory indray ireo antoko rahampitso miaraka amin'ny fanampiany ny Andriamatoa,
Julián Guerrero Orozco, Minisitra lefitra misahana ny fizahan-tany any Kolombia, hiady hevitra momba ny fanomezana fanampiana ny volkano nihatra tamin'i St.Vincent sy Grenadines. Ny Excellency, Nicole Marrder, minisitry ny fizahantany any Honduras dia nasaina hanatrika izany ihany koa.
Ny minisitra Bartlett dia any Cancun, Meksika amin'izao fihaonamben'ny Global Travel & Tourism Council (WTTC) Global Summit 2021. Ny hetsika dia tanterahina miaraka amin'ny Governemantan'i Quintana Roo, eo ambanin'ny lohahevitra 'Mampiray an'izao tontolo izao ho amin'ny famerenana amin'ny laoniny,' ary hilatsaka ny 25-27 aprily tao Cancun.